Miverina amin'ny linux ... miaraka amin'ny Funtoo! | Avy amin'ny Linux
Zavatra vitsivitsy amin'ny fiainana no nahatonga ahy hivarotra ny sary NVidia, ary ny fametrahana indray ny OS X dia nanome hakamoana be ahy ary tsy mendrika izany. Ka tamin'ny alakamisy tamin'ny herinandro lasa teo dia nanomboka nanandramana distros aho.
Nandeha namaky ny Ubuntu aho, izay tiako fa saingy rehefa diso foana ny Compiz sy ny Intel, nisy antony tsy nijanonan'ny VSync avy eo ary mandeha indray dia heveriko fa ny olana angamba dia ny famahanana ireo kernel vaovao, saingy tsy afaka nanamboatra azy aho.
Tamin'ny farany dia nanapa-kevitra ny hanandrana ny Unity ao amin'ny Archlinux aho, nametraka avy tao amin'ny fitoeram-bola azo antoka aho fa tsy natomboka ny fotoam-pivorian'ny Unity, tsy nipoitra ny dash, ka nisafidy ny hizaha ny toerana tsy marin-toerana aho ary araka ny tondroin'ny anarany dia milamina izany. .. tsy milamina (: P).
Ka nanapa-kevitra ny hanandrana Arch aho fa miaraka amin'ny KDE, saingy teo antsasaky ny fametrahana dia tadidiko ny fametrahana Gentoo mpiara-miasa aminay sy tonian-dahatsoratra Tete Plaza, ka nitady ilay tutorial Gentoo aho, very 2 andro nametrahana azy aho ary tamin'ny farany tsy afaka nametraka KDE (layer madio 8 XD), efa tena kivy tokoa, tsy misy rafitra fandidiana ao amin'ny pc, tadidiko fa nametraka ny tete mpiara-miasa aminay Funtoo.
Nandeha nijery ireo antontan-taratasin'ny tranonkala Funtoo aho, nahasarika ahy izany, toa mora takarina izany, ary noho izany avy amin'ny dvd live Linux Mint dia nanomboka nametraka Funtoo aho. Ny fametrahana izay naharitra mihoatra ny 6 ora, dia mora sy nahafinaritra ahy, ny fikirakirana ny WiFi tena namana, ary ny fanazavan'ireo sainan'ny mpampiasa izay mora takarina.
Ary farany, eto aho, miaraka amin'ny Funtoo KDE, miaraka amin'i Kernel 3.2 (raha fantatro, havaoziko tsy ho ela amin'ny kinova ambonimbony kokoa .., na dia mandeha tsara aza ny zava-drehetra… tonga lafatra…), novolavolaina ho an'ny Core i5, ary hitako ihany tamin'ny farany trano ary mahatsiaro ho milamina aho :), ka hilalao lalao vitsivitsy amin'ny etona ary tsy ho ela dia ho entanina aho hanao lesona momba ny fomba hanaovana Funtoo tsara :).
Noho izany dia MANAROA LINUX!
PS: Tsy hanao lesona momba ny fametrahana Funtoo aho, satria heveriko fa mora takarina ny antontan-taratasy amin'ny tranonkala ary angamba ny dingana sarotra indrindra azonao dia ny mianatra mampiasa fddisk.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Miverina amin'ny linux ... miaraka amin'ny Funtoo!
Eny, araka ny nolazaiko anao tamin'ilay lahatsoratra hafa: Tongasoa anao foana !!
Niverina tamin'ny naha-superman anao ianao.
Ahahahah tsara ity xd
Niverina tamin'ny Superman ve izy? Ny tiako holazaina dia hoe antitra sy mangidy? (manondro ny sarimihetsika farany ratsy, ary indraindray, mahatsikaiky)
Superman dia tsy mbola mahery fo be fitiavana, mahery izy matanjaka satria mahery izy ary miankina amin'ny mpanoratra (azy) raha toa ka ajanon'i Lex Luthor amin'ny kryptonite izy na hamotika planeta iray manontolo.
Mitovy ny eritreritro. Ankoatr'izay, tsy mahery fo mendrika ho an'ny taranaka vaovao izy.
PS: Miala tsiny amin'ilay lohahevitra tsy fantatra 🙁
«Ny fametrahana izay naharitra 6 ora, dia mora sy nahafinaritra ahy» tsy nisy teny ...
Indray mandeha ao amin'ny univ. Nandany 3 andro nahazoany KDE tao amin'ny Gentoo aho (takiana amin'izany tetikasa izany ny gentoo), rehefa afaka izany dia nody ny fahatezerako manangona-rehetra-amin'ny-fanatsarana-saina-sy-fanampiny-ketchup ary niverina tany Debian aho.
rangahy xdd .., taloha ela be dia ela aho vao nanamboatra osx, ka tsy misy dikany ireo ora 6 ao amin'ny funtoo ireo, ary ataoko ihany koa mandritra ny solosaina finday mijery anime xd
toa facebook izany. Ka avelao aho handefa zavatra manokana
@DanielC dia mankafy ny hevitrao. #OK tsia.
Funtoo tena tsara
Manoro hevitra ny eix ho anao aho mba hikaroka azy io fa haingana kokoa noho ny nipoitra –search.
Samy mipoitra -s sy eix dia tsara,
@ pandev92 Inona ny kinova famoronana napetrakao? Milamina sa ankehitriny?
Omaly aho saika hametraka Funtoo, saingy…. Nampiasa gentoo aho ary somary nanorisory (Las USEs).
Ny làlana henoinao ho tsara, mandany fotoana vitsivitsy, tsy haiko intsony izay ho hita 😀
Napetrako ny ehehe amin'izao fotoana izao, mora ny olan'ny sainam-pirenena raha toa ka te-hametraka kde ianao, miaraka amin'ny fisafidianana aloha ny piraofilina kde ary avy eo milalao miaraka amin'ireto sainam-pirenena ireto
Amin'ny anime mhh xdd, omeo fotoana ny anime, ireo fanjakana roa ambin'ny folo, avy eo jigoku shoujo (zazavavy helo), vanim-potoana sasany xd, izao tontolo izao irery ihany no mahalala, seitokai yakuindomo, gundam stargazer, sns xd
tena tsara ilay manana fanjakana roa ambin'ny folo, fa tsy nahavita azy akory, mahamenatra.
Jereo rehefa hitako ny toko farany nijanonako…: / .., izao no farany xD? raha ny marina ny ampitso dia nanantena aho fa hisy fizarana hafa amin'ny fahitalavitra, saingy tsy misy haha
Ka ianao ve no nifidy ny kernel? sa ilay tsy mitombina.
Satria any gentoo dia eo am-pitoerana foana ianao miaraka amin'ny voan-javatra.
Ny fametrahana gentoo amin'ny kde, farany nanome olana be tamiko io.
Raha ny filazan'i teteplaza ahy dia hoe, amin'ny vanim-potoana mahafinaritra, dia vitsy kokoa ny olan'ny sainam-pirenena.
Ie, efa tiako ny anime. Ny andiany izay tiako indrindra dia ny Sword Art Online, Soro no Otoshimono, Maria Holic, Lucky Star, Suzumiya. Saingy mbola manana fotoana hitako toa an'i Evangelion, Gundam, sns ...
Fa izao aho mitady Anime miaraka amin'ny hatsikana.
Mampihomehy, afaka mahita anao Mpampianatra Lehibe Onizuka ianao. Ny filazantsara dia tena tsara (tiako indrindra hatreto) andiany tsara iray hafa dia Ghost in the Shell and Ergo Proxy.
Ao amin'ny torolàlana fametrahana dia manoro hevitra anao aho hametraka ny kernel loharano debian, avy eo ianao dia afaka misafidy iray izay tadiavinao, toy ny kernel git. xD
GUNDAM !! (* __ *) Te-hahita azy ireo ho zavatra manaraka aho rehetra 😀
Mametraka funtoo aho, saingy hitako fa tsy eo intsony ilay safidy emerge-webrsync. Izany na mila apetrako izany.
Amin'ity tranga ity dia tsy napetraka izy io, ahoana no fomba fanavaozana ny portage?
Ahoana no anananao make.conf
Ohatra: amin'ny gentoo dia nanana SYNC maromaro aho, avy amin'ny toerana maro, eto Funtoo, iray ihany ve izany?
Tsy mamela ahy hisafidy ny mombamomba ny kde koa izany.
Mombamomba ny arch amin'izao fotoana izao:
Misy mombamomba ny fananganana misy ankehitriny:
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / build / andrana
Mombamomba ny tsiro misy ankehitriny:
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / flavour / minimal
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / tsiro / toeram-piasana
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / tsiro / mihamafy
Misy mombamomba ny mix-ins ankehitriny:
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / console-extra
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / pirinty
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / python3-ihany
 funtoo / 1.0 / linux-gnu / mix-ins / vmware-vahiny
profil eselect napetraka 15 ary tsy misy
Araka ny torolàlana momba ny fametrahana dia misy iray, zavatra iray hafa ny fandefasana overlay sy izany rehetra izany.
Amin'ny profil avy eo amin'ny fitsipika http://www.funtoo.org/Funtoo_Linux_Installation
jereo ny tari-dalana satria tsy voafantina toa ny ataonao xd izy ireo
sudo eselect profil manampy 15
Eny, efa nahita fialantsiny aho.
Izaho koa dia mitady ny voanio Gentoo.
Noheveriko fa hanana ny voany manokana i funtoo.
Ary manana funtools toy ny gentools koa io.
Tsia, rehefa dinihina fa ny funtoo dia miorina amin'ny gentoo, ankoatry ny mpamorona azy dia mitovy, azo lazaina fa ny funtoo dia gentoo fa misy zavatra vitsivitsy mandeha ho azy sy manatsara xd
Ie, ny hany zavatra tsikaritro, ny emerge-webrsync.
Te hiezaka ny ho faty amin'ity indray mitoraka ity ve ianao? hahaha .. Hell Girl, tena tsara ..
Ary miarahaba anao zanaka adala.
Azoko fa iray amin'ireo mankahala ubuntu ianao, gaga aho fa nametraka azy ianao.
Mikasika ny fametrahana ny firaisankina ao anaty andohalambo dia nanandrana azy tao amin'ny manjaro aho ho an'ny tutorial sy archwikis rehetra hitako, ary tsy vitako mihitsy, tsy nanomboka akory izy io rehefa nanamboatra indray, satria ireo repositories ireo dia tsy misy mitazona azy ireo, mila jerentsika inona no mitranga, fa raha manantena aho fa afaka manao izany tsy ho ela.
Niezaka ny nametraka ubuntu aho satria io ihany no iso nananako tao amin'ny pc an'ny reniko ..., ary amin'ny pc misy ahy izao dia tsy nanana rafitra fandidiana aho, ka nandeha mora aho. Na dia tsy naharitra 24 ora aza aho.
Naharitra ela ianao, tamin'ny fotoana farany nanandramako ny Ubuntu dia tsy nandalo ny LiveCD aho
Miaraka amin'izany aza isika. Noho izany antony izany dia nijanona tao amin'ny Debian Stable aho.
6 ora! Andriamanitra ô!!! Ohatrinona ny fotoana malalaka ananan'ny sasany. Soa ihany fa tsy maharitra adiny 2 ny fametrahana ahy (amin'ny tranga ratsy indrindra) Eny, tsy maintsy ekeko fa Xubuntu na Linux Mint XFCE ihany no apetrako. Ary indray mandeha SolydX. Hanam-bintana aho fa miasa ho ahy foana ny zava-drehetra amin'ny fotoana voalohany. Na dia tamin'ny fotoana farany nametrahako Xubuntu (13.04) aza dia nanjavona ny interface interface! Nahavita nifandray tamin'ny dongle USB WiFi sy fikarohana Google fohy aho (5 minitra, tsy misy intsony, tsy latsa-danja) no nahita ny vahaolana. Fotoana fametrahana io ora io <1 ora.
Fotoana malalaka atokako amin'ny fijerena anime amin'ny asabotsy izao, mba hahafahako mijery anime sy mametraka amin'ny birao birao amin'ny fotoana iray, ary tsy lany andro izany, fa araraotina xd
Azo antoka fa najanon'ny mpampiasa ny tsy fanaovany multitasking ...
Ka inona ny mahasamihafa an'i Gentoo sy Funtoo?
Ny maha samy hafa azy dia ny Funtoo dia toy ny sampana fitsapana ny gentoo fa milamina kokoa. Izy io dia manana portage mifototra amin'ny git ary dingana nohatsaraina ho an'ny maritrano kely.
Fametrahana 6 ora? Andriamanitra ô!
Ny fametrahana osx amin'ny hackintosh voalohany nataoko dia andro xD
Fantatro izany fahatsapana izany, bro.
Raha maharitra mihoatra ny 30 minitra ny fametrahana distro dia tsy apetrako izany
Fangorahana. Ubuntu maharitra adiny iray.
manantona ahy ny mankahala
ny installer ho an'ny ubuntu, mint, sns dia tsy maharitra adiny iray
Very ny fotoana nisintonao ny iso xD
ISO alaiko ao anatin'ny 15 minitra na latsaka. Manana namana Internet miadana ianao @pandev 🙂
Tsy manana Internet miadana aho, manana 15 megabytes, saingy toa ny fifandraisan'ny orinasako adsl amin'ireo mpizara ubuntu, moka xDDDD, tsy mihoatra ny 400 kb / s
Ary izany no antony ampiasako ny Debian Stable alaina avy amin'ny torrent.
Ampidiro i Mandriva dia holazainao amiko hoe mandra-pahoviana ny fampijalianao.
ary tsy manomboka amin'ireo mpamily fananana izany fa spyware xD
Ummmm .. Ho hitantsika raha te hanome sitraka an'i Funtoo aho, satria nilalao mafy tamin'i Gentoo aho hametrahana azy. : /
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh tsy avelako hametraka funtoo aho
Olana amin'ny gcc, kdemeta.
Tsy tokony hanavao ny gcc ianao, raha manavao zavatra ianao dia alao antoka fa hanao foana –exclude gcc
Fa izao koa, tsy avelako hametraka fonosana libnl hafa aho.
Tsara aho fa mipoitra --uDNav izao tontolo izao - esory ny gcc sy ny libnl
Toa mandeha tsara io.
Raha ny marina dia efa ao anaty funtoo aho, saingy amin'ny tty, mila mametraka kde sy mpamily ati-bato tanteraka aho.
Eny, farafaharatsiny, ankehitriny kokoa noho ny gentoo.
Ahoana no ahafahanao mampihetsika ny USEs izay anaty fononteny manga sy anaty ().
Nanandrana tamin'ny fonosana aho. ampiasao ary ataovy.conf
Raha tsy izany dia diso aho, raha manga izy ireo, dia tsara ny zava-drehetra .., hametrahana kde, ampiasao ny sainam-pampiasako, ary apetaho ny kdebase meta 🙂
Noo, amin'ny manga dia tsy afaka apetraka izy ireo.
Nahavita ny fanavaozana sns ve ianao, amin'ny alàlan'ny fametrahana ny saina saina oO? amin'ny fonosana.use?
Ary manana ny hadisoako mitovy aho, tsy azo apetraka i kde, raha tsy havaozina ny gcc, satria ao anatin'ny fanavaozana azy dia ampiana fortran ary io no angatahiny.
Azoko atao tsy misy fanavaozana kde, tena tsy fahita firy ny anao, heverina fa miaraka amin'ny k tonga amin'ny dingana 3 dia afaka mametraka kde mangingina ianao mhhh, nataoko toy izao rehefa hitako fa tsy nanangona mihitsy ilay gcc vaovao.
Hmm, ampidino ny dian'ny funtoo ankehitriny.
Ary zavatra vitsivitsy fotsiny no nampiana ao anaty fonosana.use
mmm, leo mahafinaritra aho. Tsy afaka manao na inona na inona aho.
Nanaraka ny torolàlana momba ny litera oO ve ianao?
Na izany na tsy izany dia toa hafahafa amiko izany.
Efa napetrako ao amin'ny forum ny kaody olana
Ie, manao ahoana izany?
Nieritreritra ny hanao ny dingana indray aho, fa pfff, indray.
Hametraka azy io indray aho.
Azonao ampitaina amiko ny volanao.conf. Mba hitsapana 😀
Ohh Pandemonium nandao ny tobin'i Gnome ianao <_
Ny zavatra tsara dia azonao atao ny mametraka ny KDE amin'ilay rafitra ampiasainao
Mampiasa ny mpifaninana amin'i Aqua ho an'ny Linux ianao amin'ny farany. KDE dia iray amin'ireo interface tsara kokoa, na dia ampiasaiko bebe kokoa amin'ny Slackware aza izany noho ny zava-bitany izay nanala ny loto taminy noho ny Ubuntu sy Debian.
Ny namana ao amin'ny pejy funtoo dia milaza fa miaraka amina rafitra efa napetraka dia afaka mametraka funtoo ianao, aiza no ahitako ireo dingana hametrahana azy amin'ny ubuntu 12.10?
Tsy haiko, fa raha vitanao amin'ny cd mivantana an'ny ubuntu na linux mint mangina izany, araho ny torolàlana tsikelikely:
Tsikelikely! xD ary manontania raha tsy efa azonao antoka fa tsy mandeha aminao ny dingana tsikelikely
Ny zava-mitranga dia tsy te handany fotoana aho, miampy ny tsy fananako Internet ato an-trano ary mifandray amin'ny tranon'ny rahavaviko aho ary efa navoakako ilay sary avy tao amin'ilay pejy ary tsy te ho very ny antontan-taratasiko ubuntu aho, Te hanova ny OS fotsiny aho.
Manandrama milina virtoaly amin'izay, ary apetraho wm maivana toy ny boaty misokatra, raha mandeha tsara dia azonao atao ny manandrana mametraka azy amin'ny solosainao .., fa ndao ary, raha te hampiasa funtoo ianao dia handany fotoana :).
Tsara izany ... Manantena aho fa tsy hiverina amin'ny sehatra hafa ianao. Claeo raha toa ka mahafeno fepetra toy izany ny sehatra ampiasainao 😛
Afaka nametraka firewall toy ny apparmor na selinux ianao, na manana azy tahaka ny nametrahanao azy, raha manaraka ny torolàlana gentoo aho dia nametraka ny voamadilo mihamafy manome ahy hadisoana amin'ny serivisy udev dia tsy azoko ny lesoka rehefa manandrana ianao raha mamaky zavatra ao amin'ny / mitady azy io fa tsy mahita na inona na inona aho, izao raha manomboka indray miaraka amin'ny kernel gentoo aho dia mandeha tsara ny zava-drehetra, saingy tsy afaka mametraka ny firewall aho, dia nieritreritra ny tsy hampandeha ny serivisy fa raha tsy mandeha aho izy, mijanona tsy mandeha intsony ny zava-drehetra, izany hoe, fitendry, totozy, sns.
Manomboka tetikasa vaovao izahay, miaraka amina endrika vaovao